Nagu saabsan - Shiinaha SNS Pneumatic Co., Ltd.
Daaweynta Isha Hawada
Qeybaha Kaabayaasha ah
Shiinaha SNSPneumatic waxaa la aasaasey sanadkii 1999 kaas oo hada noqdey kan ugu horeeya alaab-qeybiyeyaasha qaybaha pneumatic ee Shiinaha. Shirkaddu waxay daboolaysaa aag 30000 ㎡ ah, oo leh 5 saldhig oo wax soo saar ah iyo in ka badan 20 shirkadood oo hoosaadyo ah oo ka badan 1000 shaqaale.SNS waxay dhaaftay ISO9001 iyo 2000 Shahaadada Nidaamka Maareynta Tayada sababtoo ah adeeg wanaagsan iyo tayo sare leh. Waqtigaan la joogo waxaa jira in ka badan 200 wakiilo iyo qeybiyeyaal adduunka oo dhan waxaanan rajeyneynaa inaan u dhowaanno suuq caalami ah.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee SNS waa isku-darka hawada, dhululubbada, filtarka, rakibidda, qaybaha haydarka iwm. Nice banaanka ah, tayada kalsoonida leh iyo qiimaha wax ku oolku waa had iyo jeer waxa aan ku raad-joogno. Wax soo saarkayagu sifiican ayuu ugu iibiyaa dhamaan Shiinaha iyo suuqa caalamiga ah ee Koonfur-bari Aasiya, Wadamada Yurub iyo Ameerika, Bariga Dhexe, iwm SNS waxay heshay kalsoonida macaamiisha iyo sumcad wanaagsan.
Ku adkaysiga daacadnimada macaamiisha, faa'iidada wadajirka ah ee suuqa, hal-abuurnimada iyo is-dhaafsiga nafteeda, SNS waxay mustaqbalka ku gaari doontaa tayadeeda sare.
Shiinaha SNS Pneumatic waxaa la aasaasey sanadkii 1999 kaas oo hadda noqdey kan ugu horeeya alaab-qeybiyeyaasha qaybaha pneumatic ee Shiinaha. Shirkaddu waxay daboolaysaa aag 30000 ㎡ ah, oo leh 5 saldhig oo wax soo saar ah iyo in ka badan 20 shirkadood oo hoosaadyo ah oo ka badan 1000 shaqaale.SNS waxay dhaaftay ISO9001 iyo 2000 Shahaadada Nidaamka Maareynta Tayada sababtoo ah adeeg wanaagsan iyo tayo sare leh. Waqtigaan la joogo waxaa jira in ka badan 200 wakiilo iyo qeybiyeyaal adduunka oo dhan waxaanan rajeyneynaa inaan u dhowaanno suuq caalami ah.
Shirkadda: Shiinaha SNS Pneumatic Co., Ltd.
Cinwaanka: No.186 Weiliu Road, Aagga Horumarinta Dhaqaalaha, YueQing, Zhejiang, CHINA